I-air conditioner ye-Double Decker ibhasi kunye nabavelisi | SONGZ
Iimveliso zahlulwe zangamabakala aliqela ngokweemodeli ezahlukeneyo kunye nobungakanani beeyunithi ezihambelanayo. Ngokwendlela yesakhiwo, bahlula-hlulwa ngokohlobo oluhlanganisiweyo kunye nohlobo lokwahlulahlula.
Ukuphendula kubizo lwelizwe ukusukela ngo-2014 ukuza kuthi ga ngoku, i-China ikwenze olunye uhlengahlengiso kwi-air-mounted air conditioner okokuqala, yafaka itekhnoloji yomoya opholisa imeko-bume yombane ngokuthe kratya kwimeko yethu yokubuyisela umva, kwaye iphuhlise iintlobo ezahlukeneyo zezakhiwo Iimveliso ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.
I-SZB Series, ye-10-12m ibhasi ephindwe kabini
Ukucaciswa kobuchwephesha beDecker Bus A / C SZB Series:
Kucetyiswa ubude bebhasi
Isiguquli Ubunzima (ngaphandle kweClutch)
Ukwandiswa kweModeli yeValve
IINKONZO ZOKUQALA TGEN7 R134a
Ubunzima beYunithi yoPhahla
1. Ifriji yi-R134a.
2. Icandelo lomoya opholileyo lifakelwe ngaphezu kwenjini engasemva, kwaye kufuneka liqwalaselwe xa lifakelwa ukuze lityhalelwe kulo lonke, lize likhutshelwe ngaphandle ukuze kulungiswe ngokutsha. Umbhobho womoya wonxibelelwano lwenguqu phakathi kweyunithi kunye nombhobho womoya emotweni kufuneka ubekwe ngokulula.
3. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba umoya ovuthelayo wokungena ungena kwaye ugqibe umoya ngokutyibilikayo, nokuba umoya wokungenisa kunye nowokukhupha unqunyulwe ngokufanelekileyo ngaphandle komoya kunye nesekethe emfutshane. Isantya somoya secala lesithuthi kufuneka sibe≤5m / s.
4. Umbhobho womoya wonxibelelwano lwenguqu ukusuka kwiyunithi yomoya ukuya kwindlwana yomoya ebhasini inemilo ekhethekileyo, ke uyilo kufuneka luqwalasele ngokupheleleyo ukusebenza kofakelo kwaye kunciphise ukumelana nombhobho womoya. Isantya somoya sendlela yenguqu kufuneka sibe njalo≤I-12m / s.
5. Isantya somoya seyona ndlela ibalulekileyo yokuhambisa umoya ebhasini kufuneka sibe njalo ≤8m / s.
6. Kungcono ukuseta i-grille yokubuyisa umoya ngokwahlukeneyo ngokobungakanani bevolthi yomoya yemigangatho ephezulu neyasezantsi. Okanye inokusetwa yodwa kumgangatho ophezulu, kwaye umgangatho ongezantsi ubuyisela umoya kwizinyuko.
7. Nceda unxibelelane nathi ku sales@shsongz.cn ngezinye iinketho kunye neenkcukacha.
Ukuchazwa okuPhezulu kweTekhnoloji ye-SZB Series ye-air Conditioner
1. Sebenzisa ubuchwephesha bokubuyisa ubushushu bamanzi obushushu obuncinci bokunciphisa uxinzelelo oluphezulu lwenkqubo yefriji kunye nokuphucula umlinganiso wokusebenza kwamandla emveliso.
2. Ubume besakhelo ngokubanzi buncinci ngobukhulu kunye nobunzima bokukhanya.
3. Uphuculo olwenziwe ngentando, uyilo lweemodyuli, impendulo ekhawulezileyo kwiimfuno zabathengi zentengiso.
4. Zininzi iintlobo zeemveliso, ezinokugubungela u-10-12 yeemitha eziphindwe kabini kunye nebhasi enye enesiqingatha.
5. Umthamo womoya okhupha umphunga unokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zokusetyenziswa ukuze kuqinisekiswe ukuphuma komoya okufanayo.
Amatyala okuSebenza oMdibaniso weSixhobo soMoya esiDibanisa iDekker ezimbini:
Egqithileyo Uqoqosho lweMeko yoMoya kwiBhasi, umqeqeshi, iSikolo seBhasi kunye neBhasi ecacisiweyo
Okulandelayo: Ucoceko lomoya kunye neNkqubo yokubulala iintsholongwane